राजधानी नतोकि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी, भोलि मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं २७ पुस– सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रवार प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तय भएको कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा कानून तथा संसदीय व्यबस्था मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी गरेको बताए ।
‘प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छैन’ मन्त्री थापाले भने, ‘प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मत संख्याले मात्रै तोक्न सक्छ ।’ उनल प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान भने तोकिने बताए ।
राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखसँगै प्रदेशको राजधानी तोक्नसुझाव दिएपनि सरकारले राजधानीको झमेलामा नलाग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोमवार भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले जनतालाई सुगम हुनेगरी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संविधानको धारा १ सय ६३ मा व्यबस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिने छन् । बिहीवार बसेको सर्बदलीय बैठकमा वामपन्थी गठबन्धनले प्रदेश प्रमूख नियुक्तीका लागि ‘मौन समर्थन’ जनाएको थियो ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी या मुकाम तोक्दा विबाद चर्किने भएपछि सरकारले काठमाडौमै प्रदेश सभाका सांसदहरुको शपथ गराउने गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको समयमा सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको सरकारका अर्का एक मन्त्रीले बताए । निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक बस्नुपर्ने संविधानको व्यबस्था छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा कतिपय ठाउमा जनआक्रोश बढ्ने भएकोले सरकारले त्यसको अपजस बामपन्थी सरकारको टाउकोमा हाल्न खोजेको छ । एमालेले भने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि तोक्न माग गरेको छ ।
सरकारले पहिलै अस्थायी राजधानी नतोकेमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले प्रदेशको राजधानी तोक्ने छ । यसअघि सरकारले विराटनगर, जनकपुर, भक्तपुर, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरेको सूचना चुहिएपछि कतिपय ठाउमा विरोध प्रर्दर्शन शुरु भएको थियो ।
प्रदेशको राजधानी मागगर्दै धनकुट्टा र डोटीमा आन्दोलन भएका छन भने बुटवलमा कांग्रेसकै अगुवाइमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको समयमा माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामाको तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखका जसको चर्चा छ
सरकारले समाजका ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारको तयारी छ । भारतमा पनि समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई ‘गभर्नर’ तोक्ने व्यबस्था छ ।
नेपाली कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखका लागि पूर्वप्रधान सेनापति रुक्माङगत कटवालदेखि म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महाविर पुन सम्मको चर्चा छ । सात प्रदेश मध्ये कम्तिमा दुइ जना महिला नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सिएनएन हिरो माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाको नाम पनि प्रदेश प्रमुखको रुपमा चर्चा छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति सम्मको नाम चर्चामा रहेको छ ।
सरकारले एमालेसँग दुइ र माओवादी केन्द्रसँग एकजनाको नाम मागेको स्रोतको दावी छ । ययअघि वामपन्थी दलहरुले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति एकलौटी गरेमा पछि उल्टाउने चेतावनी दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल तथा राम, नगिना सिंहको नाम समेत चर्चामा छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएपछि प्रदेश सभाको अन्तिम नतिजा बुझाउन सझिलो हुने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ ।
पुस एक गतेदेखि ज्ञानेन्द्र किन जाँदैछन् एकसाताको लागि पोखरा ?
नेकपा नाम विवाद : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
राजपाभित्र कुनै विवाद छैन : नेता महन्थ ठाकुर
कांग्रेसमा गुटभित्रै तनाव : पौडेलभन्दा देउवालाई हाइसञ्चो !
राप्रपा अब पहिलो पार्टी हुन्छ – कमल थापा
टीकापुरमा थरुहटको भेला : आफ्नै नेतालाई कारवाही गर्ने चेतावनी
विवाहपञ्चमीमा सहभागी भएर फर्किए योगी, भने – जनकपुरधाम ज्ञान केन्द्र हो जनकपुरधाम – भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले माता सीताको जन्मभूमि जनकपुरधाम केन्द्र केन्द्र भएको बताएका छन् । विवाहपञ्चमीको अवसरमा सहभागी हुन जनकपुर पुगेका मुख्यमन्...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर – वाइडबडी विमान खरिदमा निगमको गम्भीर त्रुटि
राज्य बलियो भए मात्रै मौलिक हक कार्यान्वयन : मुख्यमन्त्री पोखरेल
मुसहरको हत्या अभियुक्त पक्राउ
प्रदेश सभाको ‘कछुवा’ गतिप्रति सांसदको आपत्ति, हिउँदे अधिवेशन शुरू
परिणाममुखी काम देखाउन सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन, कार्ययोजना बुझाउन ७ दिने समयसीमा